NCA-S EAO | Activity Detail
Col. Sai Ngern delivered the Closing Speech at Framework Agreement on NCA Implementation Negotiation Team Meeting
NCA-S EAO’s Framework Agreement on NCA Implementation Negotiation Team Meeting (2nd Session) has been successfully held in Chiang Mai, Thailand from 16 to 18 November...
NCA-S EAO’s Framework Agreement on NCA Implementation Negotiation Team Meeting (2nd Session) held in Chiang Mai today
NCA-S EAO’s Framework Agreement on NCA Implementation Negotiation Team Meeting (2nd Session) is being held in Chiang Mai, Thailand today. The meeting will have been...
The Speech of General Saw Mutu Sae Poe at 4th Anniversary of Nationwide Ceasefire Agreement
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ (၂၈) ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၊ MICC (2) တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) (၄) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနား တွင် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးသော တိုင်းရင်း သား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စား ပြောကြားသည့်...
The closing speech of Col. Sai Ngern at preparatory meeting between Government and NCA-S EAO for 8th JICM
(၈)ကြိမ်မြောက် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခို်က်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး (JICM) ကျင်းပနိုင် ရေးအတွက် အစိုးရနှင့် NCA-S EAO အကြို ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့ အောက်တိုဘာလ (၂၅) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပလျက်ရှိရာ မွန်းလွဲပိုင်းတွင်...
Preparatory meeting between the Government and NCA-S EAO for 8th JICM held at NRPC, Nay Pyi Taw
အခက်အခဲအမျိုးမျိုး၊ စိန်ခေါ်မှုအဖုံဖုံကြားက ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်နေတာဟာ ကိုယ်တစ်ဦးတည်း၊ ကိုယ့်တစ်ဖွဲ့တည်း၊ ကိုယ့်အ စုအဖွဲ့တစ်ခုတည်း ရဲ့ အကျိုးကို လိုချင် တာ ပဓာနမဟုတ်ဘဲ ပြည်ထောင်စုသားအားလုံးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ သတိမူမိဖို့ လိုအပ်ဟု NCA-S EAO JICM ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းငင်း...
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်နေ့၊ နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်လက်မှတ် ရေးထိုး ထားသော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ (၂၈) ကြိမ် မြောက် NCA-S EAO UPDJC အစည်းအဝေး ညနေပိုင်းတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး နိဂုံးချုပ်အမှာစကားကို NCA-S EAO...
28th NCA-S EAO UPDJC Meeting held in Yangon today
ယနေ့ အောက်တိုဘာလ (၂၃) ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကျင်းပလျက်ရှိသည့် တစ်နိုင်ငံလုံးပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေး ထိုးထား သော တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ (၂၈) ကြိမ် မြောက် NCA-S EAO UPDJC အစည်းအဝေး တွင် NCA-S EAO UPDJC အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်...
Gen. Yawd Serk delivered the closing speech at PPST Meeting (05/ 2019)
General Yawd Serk, the Acting Team Leader of PPST, delivered the closing speech at PPST Meeting (05/ 2019), held in Chiang Mai, Thailand from 10...